Viera Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Viera Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Salama daholo, te hianatra teny anglisy ve ianao, fa sarotra noho ny tsy fitenin-drazana? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahagaga ho anareo rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Viera Apk. Io no fampiharana tsara indrindra hianarana io fiteny io ary koa fanao amin'ny fitsapana manara-penitra amin'ny teny anglisy.
Araka ny fantatrao, ny anglisy dia fiteny vahiny dia iray amin'ireo fiteny manandanja indrindra eto an-tany. Ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia mifampiresaka amin'ity fiteny ity mba hizara fahalalana, hevitra, fahatsapana ary maro hafa. Noho izany, iray amin'ireo zava-dehibe tokony hifandraisan'ny tsirairay amin'ny olona samihafa amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Matetika, ireo mpianatra avy amin'ny firenena samihafa, izay tsy teratany amin'ity fiteny ity, dia mangataka karazana vatsim-pianarana amin'ny tetika iraisam-pirenena rehetra dia tsy maintsy mianatra izany. Iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja izany, hahazoana fahatsapana tsara sy vatsim-pianarana.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity fampiharana mahagaga ity, izay ahafahanao mianatra fiteny manara-penitra. Io no safidy tsara indrindra hianarana sy hahazoana isa tsara amin'ny fitsapana manara-penitra. Hizara antsipiriany bebe kokoa momba ity app ity izahay. Koa raha te hahalala ianao dia mijanòna eto aminay.
Topimaso momba ny Viera Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny Estudyme Studio. Ny tanjona lehibe amin'ny famolavolana ity fampiharana ity dia ny hanamora ny olona, ​​izay te hianatra ny fiteny mba hanatsara ny fahaizany, ny fandraharahana, ny fahaiza-manaony ary ny fifandraisana manan-danja indrindra.
Ny vatsim-pianarana samihafa dia misy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, fa ny iray amin'ireo fepetra lehibe ilaina dia ny fahalalana traikefa amin'ny fiteny mahazatra amin'ny teny anglisy. Noho izany ity app ity dia manolotra ny momba azy rehetra. Manome haino aman-jery ahafahanao mianatra haingana kokoa, toy ny sarin'ny zavatra, toerana ary maro hafa.
The App fampiharana manome rafitra fanontaniana sy valiny ihany koa, izay ahafahanao manatsara ny fotoana sy ny fahaizanao mamaly. Izy io koa dia manolotra sehatra fifampiresahana, izay ahafahanao manatsara ny fahaizanao miresaka. Misy safidy maro hafa, izay azonao hatsaraina ny fitsipi-pitenenanao, voambolana. Manome fanontaniana mihoatra ny 4,000 izy io.
Viera App dia manolotra fiasa bebe kokoa, izay azonao idirana maimaim-poana. Saingy manome fiasa premium ihany koa izy io, ahafahanao mamaha ny sakana amin'ny doka sy ny fiasa hafa. Noho izany, amin'ny maha fanandramana manokana anao dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hianarana azy io.
Raha mpianatra ianao dia afaka manandrana ny dikan-teny maimaim-poana. Azo alaina amin'ny fomba ivelan'ny Internet ihany koa izy io, izay tsy hisy doka hiseho mandritra ny fianarana. Raha mpianatra matihanina ianao dia afaka mividy ny kinova premium ary mahazo miditra amin'ny endri-javatra rehetra.
Misy endri-javatra maro kokoa amin'ity fampiharana ity, izay azonao jerena. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary manomboka mikaroka. Raha manana olana amin'ny fidirana amin'izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Hamaha ny olanao rehetra izahay.
anarana JEREO NY
Anaran'ny fonosana com.estudyme.toeic
Rehefa nizara ny sasany tamin'ireo fiasa taminao izahay tao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy mihoatra noho izay azonao zahana. Ao amin'ny lisitra etsy ambany no hizarantsika ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity aminao rehetra. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Fampiharana tsara indrindra hianarana fiteny anglisy manara-penitra
Hatsarao ny fahalemena
Manome fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fanontaniana tsirairay
Azo alaina ihany koa ny Progress Bar
Azo atao koa ny Offline Mode
Raha te-hisintona Viera Apk, azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store na azonao sintonina eto amin'ity pejy ity. Izahay koa dia manome ny kinova farany an'ny fampiharana ho anao rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Tsindrio izany ary hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Mandehana fotsiny amin'ny Settings ary sokafy ny Panel Security, avy eo Checkmark 'Source tsy fantatra'. Aorian'ity fizotrany ity dia afaka mametraka ny rakitra Apk amin'ny fitaovanao ianao.
Viera Apk no fampiharana Android tsara indrindra hianarana ny fiteny iraisam-pirenena. Noho izany, mahazoa tombony amin'ireo endriny. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags App fampiharana, JEREO NY, Viera apk, Viera App Post Fikarohana
DiziPAL Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Ninjanime Apk Download Ho an'ny Android